Vakuru Vakuru Vaviri Vanoshaya Zvakare neChirwere cheCovid-19
Chirwere cheCovid-19 chiri kuramba chichiuraya vanhu munyika kusanganisra vakuru vakuru zvichitevera kushaya nhasi kwemumiriri weZimbabwe kuUnited Arab Emirates, VaJetro Ndlovu.
Kushaya kwaVaNdlovu kwaziviswa nemuzinda weZimbabwe ku Ankara uchiti warasikirwa zvikuru nekushaya kwavo zvichitevera kurwara nechirwere cheCovid-19.
Muzinda uyu wati unochema nemhuri yeVaNdlovu panguva ino yakaomarara.
Kushaya kwaVaNdlovu kunotevera kushaya kwevaimbove mumiriri weZanu PF mudunhu reMutasa North mudare reHouse of Assembly, VaLuke Masamvu, avo vakashaya nezuro nechirwere cheCovid-19.
Kunyange hazvo tisina kunzwa kumutauriri weZanu PF, VaSimon Khaya Moyo, nezvekushaya kwenhengo dzebato ravo, kushaya kwaVaMasamvu kwaziviswawo nemutevedzeri wegurukota rezvevechidiki, VaTinoda Machakaire, padandemutande ravo reFacebook.
Kushaya kwevarume ava kunotevera kushaya kwedzimwe nhengo dzepasoro mubato reZanu PF dzinoti; vaive gurukota reManicaland, Amai Ellen Gwaradzimba, vaive gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaSibusiso Moyo, vaive gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu, VaJoel Biggie Matiza, vaive mukuru wemajeri, VaParadzai Zimondi, nhengo yeZanu PF Central Committee, VaMorton Malianga, pamwe nevakambove gurukota redzidzo yepasi, VaAneas Chigwedere. Vose vanhu ava vashaya mwedzi uno waNdira.
Vaive gurukota rezvekurima, VaPerence Shiri, ndivo vakatanga kufa nechirwere ichi gore rapera.
Vanhu vafa kusvika pari zvino munyika yose vave chiuru chimwe chete nezana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 1 178 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevasere nezuro.
Richizivisa zvakabuda muongororo yakaitwa nezuro, bazi rezvehutano rakati vanhu mazana matatu nevatanhatu, 306, vakabatwa nechirwere ichi. Izvi zvakaita kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose, husvike pazviuru makumi matatu nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevaviri, 32, 952.
Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi, vava zviuru makumi maviri nezvina, nemazana masere ane makumi manomwe nevaviri, 24, 872, zvichitevera kupora nezuro wakare, kwevanhu mazana mana nemakumi mashanu nevatatu, 453.
Vanhu vachiri kubatikana nechirwere ichi, vava zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe nevaviri, 6, 902
Mumwe weavo vakapora kuchirwere cheCovid-19, igurukota reMashonaland West, Amai Mliswa-Chikoka, avo vanoti kukurukura hunge wapotswa vachiti vakasvika nguva yavakafunga kuti havachararama nekuda wekurwadziwa pamwe nekutadza kufema.
Amai Mliswa-Chikoka vanoti pavakatanga kurwara havana kumbofunga kuti chingava chirwere cheCovid-19 vachiti chirwere ichi chakauya nenzira
yekurwara kwavo kweasima.
Amai Mliswa-Chikoka vari kukurudzira hurumende, masangano akazvimirira nemunhu wese kuti aparidze shoko rekudzivirira chirwere cheCovid-19muye kuchitora zvine hudzamu nekuti chiriko uye chinouraya.
Vaimbove gurukota rezvehutano muhurumende yemubatanidzwa,, VaHenry Madzorera, vanoti zvakanaka kuti vanhu vari kupora kunyange zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzvipatara.
VaMadzorera vanoti hurumende inofanirwa kuzivisa vanhu kuti vari
kuongorora chii kuti vazoti munhu apora kubva pudenda reCovid-19.
Hatina kunzwa kune gurukota rezvemitemo, VaZiyambi Ziyambi, avo vanonzi vakambosangana naAmai Mliswa nguva yavakabatwa chirwere cheCovid-19 muna Mbudzi gore rapera.
Mamwe makurukota apora pachirwere ichii anosanganisira gurukota
reMidlands, VaLarry Mavhima.